Ụbọchị: 1 November 2019
Na Istanbul, ememme 29 October Republic nke ụgbọ oloko n'okporo ụzọ na uwe mkpuchi, a na-abụ abụ nke iri. Ọ bụ ezie na a na-ekerịta ihe onyonyo a na igwe mgbasa ozi, a kọwara ntụgharị a "ihe na-akpaghasị tarafından nke ndị otu Islamists na mmeghachi omume ya [More ...]
Vidio e dere na Ọktọba na Istanbul Metro 29 dọtara nnukwu mmeghachi omume. 10 na ụzọ ụgbọ oloko. Nwa amaala nke nwere nkuku na-esote ụmụ amaala na-abụ abụ nke Afọ n’okwu [More ...]
Istanbul dara ada na 5 nke izizi ọkwa ọkwa njem ọha na eze; N'ime nyocha a kpọrọ “Njiko Njikọ Metrogbọ njem Obodo”, Eskişehir bu ụzọ, Konya bụ onye nke abụọ, Erzurum nọ n'ọkwa nke atọ, 10 bụ obodo kachasị dị jụụ na njem ọha. [More ...]
Onye na - agbachitere ngwa ahịa mbụ anyị. Ọ bụkwa onye na-emepụta stovu ụlọ na igbe ego İş Bank bank. Ha ghọrọ enyi mgbe Atatürk gbara ọkụ na 1913 na Sofia. Zübeyde Hanım gwara nwa ya nwoke na akwụkwọ ozi: “Nkwado Şakir”. [More ...]
Ünalan Station Station nche enyo enyo mmeghari nke ndị njem nwere nkwarụ, a kpọtụrụ nna ya napụta ezinụlọ ya. Nna m na nwa ya nwoke na-ezute, n’ụbọchị ọ na-arụ ọrụ n’oge ahụ n’ihi na obi adịghị nwunye ya mma [More ...]
Onye Omenala na Omenala Mehmet Nuri Ersoy: “Enwere m olileanya na ọ bụrụ na anyị anaghị anọgidesi ike na ihu igwe, ọ na-esiri gị ike ịrụ ọrụ na mmiri ozuzo, ị na-ahụ ọnọdụ ọrụ, mana mgbe oge ahụ ruru, enwere m olileanya na site n'ịrụ oge oge 2020 18 [More ...]
Vodafone 41 ga-agba ọsọ na Sọnde. Na Marathon Istanbul, a ga-emeghere ndị na-ahụ maka egwuregwu egwuregwu a, ọ bụghị maka ụgbọ. 15 July routezọ niile na okporo ụzọ niile ejikọtara ọnụ, gụnyere Oke Nwụrụ nke Martyrs, 3 November [More ...]
N'ime akụkọ banyere mkpesa 2019 nke 3, solọ Ọrụ Ọgụgụ Kosovo kwuru na n'ọnwa ikpeazụ nke 3, ihe dị ka ndị njem njem 90 puku mmadụ ji ụgbọ oloko ahụ mee ihe dị ka ụzọ njem. Kosovo Statistical Agency ikuku, ụzọ ụgbọ okporo ígwè, okporo ụzọ [More ...]
Obodo Ordu mepere emepe, nke etinyere ego nke okporo ụzọ na-eku ume okporo ụzọ obodo site na ụzọ ndị ọzọ, emeela ka ọrụ ya gbadaa n'okporo ụzọ Şehit Birol Yıldırım, nke e mepụtara iji belata ibufe okporo ụzọ na Şehit Yalçın Yamaner Boulevard. ọhụrụ [More ...]
Usoro iji mee nkuzi ọnụọgụ na Ankara N’ime Oke Nkume; Ankara Obodo Ankara dere usoro mgbakọ na mwepụ, fisiks na kemịkalụ na okwute ndị a rụzigharịrị n'okporo ụzọ Yüksel n'ime okirikiri “Red Crescent Renewal Project”. Obodo Ukwuu iji bulite mmata [More ...]
Nkịtị mara mma na nnukwu ụlọ Ankara na gburugburu; Ngalaba Obodo na Ankara Obodo Na-ahụ Maka Ọdịbendị na Ọdịnala na-aga n'ihu na-achọ ụlọ Ankara na gburugburu ya mma n'ụzọ dabara adaba na akụkọ ederede. Ebe obibi n’ọtụtụ mmepeanya [More ...]
Ngwa dị larịị nke Manisa Metropolitan Obodo bidoro n'okporo ụzọ ahụ na-enye njikọ dị n'etiti Gölmarmara na Thienli na-aga n'ihu. Mịnịsta ime obodo na Mịnịsta Secretary General Ali Aliztozlu na Burak Aslay, Roadzọ Obodo Isi Obodo [More ...]
Site na itinye ego nke Kayseri Obodo ukwu, Erciyes Ski Center, nke abụrụla otu n'ime ndị isi na-ewu ewu na mpaghara ụwa, na-akwadebe maka oge oge 2019-2020. Erciyes abụrụla otu n'ime ụlọ egwuregwu sịnịma kachasị n'ụwa niile na ntinye aka nke Kayseri Obodo ukwu. [More ...]